Sainte Marie : miditra an-tsehatra momba ireo vazaha roa maty ny Frantsay (NewsMada) | AEMW
Sainte Marie : miditra an-tsehatra momba ireo vazaha roa maty ny Frantsay (NewsMada)
Niditra an-tsehatra ary mandray an-tanana miaraka amin’ireo mpitandro filaminana manao fanadihadiana ny fanjakana frantsay momba ilay raharaha famonoana teratany frantsay roa tao Sainte Marie, ny alahady vao maraina be. Nanameloka ity vonoan’olona feno habibiana ity ny fanambaran’ny minisitera ny Raharaham-bahiny frantsay. Fantatra fa efa nifandray tamin’ny fianakavian’ireo niharam-boina ny fanjakana frantsay ary manao ny fomba rehefa ahafantarana izay tompon’antoka tamin’izany.
Hohafainganina ny fanadihadiana…
Nanamafy rahateo koa ny minisitry ny Fizahantany Rolland Ratsiraka fa tsy maintsy hohafainganina ny fanadihadiana ary tsy maintsy ho hita ireo nahavanon-doza namono ireto teratany frantsay ireto. Nohamafisin’ny ben’ny Tanàn’ny Nosy Sainte Marie koa fa samy nahitana dian-kapoka teo amin’ny lohan’ireo niharam-boina.
Nilaza kosa ny filoha lefitry ny Cétamada sady kaonsilin’i Frantsa ao Sainte Marie, Jean Jacques Ravello fa efa 35 taona niainana tao Sainte Marie izy ary tsy mbola nahita olana tamin’ireo mponina ao an-toerana ary milamina rahateo koa ny fandriampahalemana, saingy nahavariana ity zava-nitranga, afakomaly ity. Efa an-taony maro koa no nisy ireo mpanao asa an-tsitrapo tao Sainte Marie ary tsy mbola nahita tranga hafahafa mihitsy tamin’izy ireo.
Andrasana, araka izany, ny valin’ny fanadihadiana momba ity raharaha ity. Tsiahivina fa andro vitsivitsy lasa izay no nisy ilay teratany frantsay niala sasatra teto amintsika maty novonoin’ny jiolahy teny Mangasoavina. Teo koa ireo mpivady frantsay novonoin’ny jiolahy teo amoron-dranomasina ao Toliara, ny taona 2012.
← Sefafi : “Tafahoatra ny tsy firaharahana ny mpiray tanindrazana” (NewsMada)
Naiditra am-ponja ny filohan’ny Hafari Malagasy (NewsMada) →